Oonodoli be-UR yeyona venkile yoonodoli yobuchwephesha kunye nebalaseleyo kwi-intanethi
UDanna Cameron omdaka omnyama onothando unodoli TPE Isifuba esikhulu-78 Intombazana yomculo ethandwayo 148CM UR Oonodoli beenwele ezimfutshane ezimnyama umphezulu omfusa
I-168cm Abby-Amehlo aBluwu Ukuqina kwamabele amakhulu TPE Unodoli wothando
U-Amani akazange azithintele oonodoli abanjengoBomi beSex General Ches Intombazana ene-Erotic TPE 148 CM imilebe ehendayo eBrown
Salem Round amabele amakhulu anzulu cleavage I-Sex eshibhile unodoli obambe isiqingatha somzimba TPE 88CM Iwigi yeGolide Bonisa
UAdrianna Okwenyani labia ngesondo unodoli omde ophotheneyo omnyama TPE 88CM Isandla esisiqingatha somzimba Amehlo ahendayo
I-Yaretzi Golden Iinwele ezinde ezithanda unodoli weSitayile saseYurophu saseMelika 160CM Iqela leHip-Hop iBreast encinci ye-TPE
U-Lorelei obhinqileyo onguTitshala we-TPE kuBomi bokwenyani I-Doll ye-Blonde yeNwele 158CM eNxibele iiStokhwe
Helena Blonde Ubomi bokwenyani iSex Doll Thick Lips 150CM Amabele amakhulu No. 135 Head TPE
I-Malani Yellow White Hair Love Doll Sports Tube Top 141CM Shorts TPE Material
Isinxibo soMtshato sikaDylan sithanda unodoli webele elikhulu 158CM Amehlo aBlue TPE Material A3 Imilenze engqindilili
Remy Blonde Real Sex Doll Red Top 165CM Amehlo amakhulu TPE Material Big Fat Woman
Maia Half Body Torso Oonodoli Bezesondo ezitshiphukileyo Blonde 80CM TPE Material
I-100% entsha kraca unodoli wesondo we-UR othengiswayo
Fumana unodoli wesondo owuthandayo iqabane apha! Mhlawumbi umtsha kwihlabathi labadala loonodoli besondo, okanye mhlawumbi uyingcali enamava. Siyakuzingca ngokunikezela ngeempawu zoonodoli zothando ezikumgangatho ophezulu. Ukusuka kukhetho lwezinto eziphathekayo, ukhetha oonodoli besondo be-silicone, Iidloli zesondo ze-TPE, kunye nokushisa, i-doll doll yesondo yothando nayo ilungile, ukusuka kwindawo yokujonga uphawu, sisebenzisana neempawu ezininzi zeedonki, abaninzi abathengi bakhetha i-Irontech Doll, i-WM Dolls,I-SE Doll,Qita Dolls, ukuba ufuna ukufumana oonodoli bezesondo abancinci, sincoma ukuba ujonge i-FU Doll okanye i-FJ Doll kwisitayile soonodoli besini sase-Asia, ewe, eyona xabiso liphantsi kunye nelona mgangatho liphezulu. Iidoli ze-UR, Iidoli ze-UR zineentlobo ezininzi, Ngokubhekiselele kwiintlobo zoonodoli zesini, kukho iidoli zesini zabantu abadala, iidoli zesondo ezikhohlisayo, iidoli zesondo ze-Blonde, iidoli zesondo ezinkulu zebele, okanye unokuphuma kwaye ulibale ukuba yintoni umendo xa uqala ukufika. Apha, sinawo amagama ethu angundoqo oonodoli besondo, unokuza kwiphepha lethu ngokukhangela oonodoli bezocansi be-UR,Unodoli we-UR tpe unodoli wesini，Oyena unodoli we-UR tpe wesondo, oshushu Oonodoli bezesondo be-UR,UR unodoli oyindoda wesini apha, sinento oyifunayo. Ukuba awuboni unodoli wesini oyifunayo, yinto yethutyana. Hayi kwi-intanethi, nceda uqhagamshelane nenkonzo yethu yabathengi, siya kukubonelela ngenani elikhulu lezinto ezahlukeneyo kunye neentlobo ezahlukeneyo zoonodoli bezesondo onokukhetha kuzo. Khumbula, sithengisa oonodoli bokwenyani kuphela, hayi abomgunyathi.
Fumana unodoli wamaphupha akho-Oonodoli bezesondo abancinci bathengiswa kwi-Intanethi ngo-2022
Wamkelekile Iidoli ze-UR iphepha le-brand, nali i-UR Dolls' ibhrendi eyodwa, apha unokuyibona ngokucacileyo loo nto UR Love Dolls igxile kakhulu kwisitayile sayo soonodoli, asilandeli indlela yakudala yabanye, sinesakhe isimbo.
Ngo-2022-Khetha unodoli wesondo ofanele wena kooDoli be-UR
Lo nguvimba wendyebo wexabiso eliphantsi unodoli wesondo. Uninzi lwaba nodoli besini ubukhulu becala isimbo saseYurophu. Iinwele zabo zibugolide butyheli, kanye njengokuba ilanga lithe saa ngokwemvelo kubo. Umfanekiso othandekayo wenza umdlalo ogqibeleleyo. Abanye TPE iidoli ezintandathu babe nesisu esikhulu, njengomfazi okhulelweyo, kwaye babonakala ngathi bafuna ukuhoywa. Ewe, ungaphinda uyikhulule ibhulukhwe yakhe, ubeke umthondo othe nkqo kuyo, kwaye uyifake ngamandla. Yena, uyakuyonwabela le mvakalelo kakhulu. Amantombazana ezi mpawu ze-UR Dolls zinemilo eyahlukeneyo, kodwa zinomntu kakhulu, ngoko zikhangeleka ngathi ziphila. Ufanele ukwazi ukuba ngoFebruwari 2022, ngenxa yokusasazeka kwemfazwe kunye nengxabano e-Ukraine, inani elikhulu labasetyhini abahle lanyamalala, kwaye imfazwe Ikhohlakele, kodwa i-sex dolls ayifuni, ngakumbi. Oonodoli be-UR bokwenyani, ezi dolls zesini ziya kuhlala nawe ngonaphakade. Ukuba awuyithandi kwaye ufuna ukufumana okufanayo Oonodoli baseYurophu, Unodoli weIrontech lukhetho olufanelekileyo.
Igama lebrand:Iidoli ze-UR
Material: Oonodoli bezesondo be-TPE kunye noNodoli weSilicone weSini Uhlobo: Oonodoli bezesondo zabantu abadala, oonodoli bezesondo abahendayo, oonodoli bezesondo blonde, oonodoli abakhulu bezesondo, njalo njalo.
Intshayelelo: Unodoli we-UR wenziwa ngezinto ezikumgangatho ophezulu we-TPE we-sex doll kunye nensimbi engenasici, ehambelana kakhulu nokusingqongileyo kwaye ikhuselekile. Ngokuphuculwa okuqhubekayo kobugcisa bemveliso, isizukulwana ngasinye se Oonodoli bezesondo be-UR iya kuba yinyani ngakumbi kwaye inamacala amathathu ngenkangeleko. Oonodoli be-UR abakwazi ukuhlangabezana neemfuno zakho zesondo kuphela, kodwa bahamba nawe entwasahlobo, ehlobo, ekwindla nasebusika njengabahlobo abakhulu, bahamba nawe ebunzimeni behlabathi, kwaye ujabulele ubomi obugqibeleleyo.
Into ekufuneka uyazi kukuba sineendlela ezininzi zoonodoli besini sabadala. Ii-Urdolls ziya kukubonelela ngeqabane elifanelekileyo lezesondo, nokuba lijongana nesithukuthezi ngokweemvakalelo okanye iimfuno zesini ngokwasemzimbeni. Ingaba uthanda iidoli zesondo zesifuba esikhulu, iidoli zesondo ezisicaba, iidoli zesondo zobomi okanye ezinye iidoli zesini, i-urdolls ineedola zesini ezahlukeneyo ukuze zihambelane neemfuno zakho. Ngenxa yokuba sisitolo soonodoli bezesondo, sinokuqinisekisa ukuba uya kufumana unodoli wakho wesondo omdala owuthandayo kwiwebhusayithi yethu. Kwabo bathanda ukulandela umgangatho ophezulu, ivenkile yethu yoonodoli kwi-intanethi ibonelela ngoonodoli besondo berobhothi, unxibelelwano olukrelekrele, ukwenza izandi zokulala ngexesha lesondo, ukuze oonodoli bezesondo bakwazi ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho ezityebileyo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, sinazo ezininzi izithuba zeblogi ukukufundisa ulwazi loonodoli, ukuqinisekisa ukuba uyazi ukusombulula iingxaki ezingeyomfuneko kwinkqubo yokusetyenziswa. Ukuba uhlangabezana neengxaki nge-doll yesini, nceda uqhagamshelane nenkonzo yethu yabathengi, siya kusombulula ingxaki kuwe 24/7.
Oonodoli be-UR yenye yeevenkile eziphezulu zoonodoli abalinganisiweyo ngesondo. Oonodoli be-UR babonelela kuphela ngoonodoli bezesondo abakumgangatho ophakamileyo. Sithembisa zonke iidoli zesondo zikumgangatho ophezulu kunye ne-100% yoonodoli abatsha besondo. Sinikela ingqalelo ekukhuseleni ubumfihlo babathengi, awuyi kufumana naluphi na ulwazi lomntu kwiphakheji.
✓ Eyona Brand idumileyo kaNodoli
✓ Ifana nolusu lokwenyani
✓Iintlobo ezininzi zoMzimba onokuthi ukhethe kuzo
✓ Ngaphezu kwe-200 yeeNtloko/uBuso onokukhetha kuzo
✓Oonodoli bezesondo be-TPE abakwikhwalithi ephezulu kunye noNodoli weSilicone ngesondo
✓ Amathambo amatsha ngokukhetha: amalungu aphindwe kabini, amagxa, njalo njalo.
Wamkelekile kuThenga ooDoli be-UR